Indlu yaseNewcastle ezimbini
5 recent guests complimented Maureen for outstanding hospitality.
Eli gumbi liphezulu, likumbindi wale dolophu incinci, lisanda kulungiswa kwaye linemigangatho yomthi oqinileyo, izinto zokubala zebhlokhi, isinki yegranite kunye neglasi ebuyela umva ekhitshini. Kukho amagumbi amabini okulala, indawo yokungena yabucala enezinyuko ezinkulu kunye negaraji. Ndiligcisa kwaye istudiyo sam sodongwe sikwiibhloko ezimbini kude. Wamkelekile ukuba ufowune okanye uze, kwaye iindibano zocweyo okanye izifundo zinokucwangciselwa wena okanye iqela lakho.
Indlu iphezulu kwaye inamagumbi amabini okulala. ikhitshi kunye negumbi lokuhlala. Inendlu yokuhlamba yabucala kwindawo yokumisa izinyuko.
Le ndlu ikwindawo yokuhlala edolophini yivenkile yekofu kunye neekliniki zonyango. Ithiyetha yasekuhlaleni ingaphesheya kwesitrato kwaye iThala leeNcwadi lethu elihle iKendall Young lizibhlokhi nje ezimbini ukusuka apho. I-Fuller Hall Recreation Centre iku-1/2 block kude kwaye inejimu, iphuli yangaphakathi kunye nenkundla yebhola yerakethi. Banikezela ngokudlula kosuku ukuba unomdla. Iqula langaphandle lizibhloko ezimbalwa kude.
Ndiya kufumaneka ukuba unemibuzo okanye iinkxalabo, vele ufowunele.